Lubuntu 17.04 haizoenderana nePowerPC | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo zvakatoitika neiyo yepamutemo Ubuntu uye nezvimwe zvinonaka zvacho, iyo 32-bit PowerPC dhizaini ichanyangarika zvakare kubva kuLubuntu 17.04 OS, iyo yakamira zvakare kushanda neiyi dhizaini, ichisiya vashandisi vasina Lubuntu kubva zvino zvichienda mberi.
Kusvikira mazuva ano ekupedzisira, zvaifungidzirwa kuti Lubuntu 17.04 yaizowirirana nePowerPC, zvisinei,ivo vachamira kushambadza zuva nezuva ISOs muna Kukadzi 13, kunyangwe isu tichigona kuenderera tichirodha pasi maSIs aburitswa nanhasi, kunyangwe zvisingakurudzirwe nekuda kwenyaya yekusagadzikana nekushaiwa rutsigiro.
Izvi zvinoshandura kuLubuntu 16.10 pane yazvino PowerPC inoenderana Lubuntu 32-bit, tichifa nayo nguva (kunyangwe isu tichigona kushandisa vhezheni 16.04 LTS kusvika 2019). Neshanduko iyi, Lubuntu ajoina zvimwe zvekugovera izvo zvasarudza kuita pasina ichi chivakwa, chivakwa chinotoita sechinhu chekare.
Izvi zvinosiya Ubuntu Mate se iyo chete distro iyo inoshanda ne32 bit PowerPC yeUbuntu 17.04, saka kana iwe uchiri nePC inobata ichi chivakwa, ndiyo ichave iyo yega flavour yeiyo Ubuntu 17.04 inoshanda sisitimu iwe yaunogona kushandisa.
Izvo zvakasara zveUbuntu zvinonaka yatodonha rutsigiro nePowerPC gore rapfuura, Nekuti chivakwa chiri kuwedzera kusashandiswa, mukufarira x84 uye x64 mapurani, ayo ndiwo anoshandiswa izvozvi mumidziyo mizhinji yemakomputa.
Hapana mubvunzo zvinoita kunge mazuva ekare akanaka ePowerPC ekuvakisa ave kusvika kumagumo, nekuti izvozvi zvinoitwa mune mashoma masisitimu. Dzakanga dziri nguva dzakanaka apo dzakagara, asi zvinoita sekunge nguva idzi dzapera.
Ehe, kana iwe uchida kutaura zvakanaka munzira huru, iwe uchiri kukwanisa kurodha ichangoburwa Ubuntu 17.04 Mazuva ese Kuvaka kwePowerPC kubatana uku. Kuti kana, iri sisitimu inoshanda mukusimudzira, haina kugadzikana (uye muPowerPC haimbozove), saka mashandisiro ayo munzvimbo dzebasa haakurudzirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Lubuntu 17.04 haizoenderana nePowerPC
Komputa yevabereki vangu ine Lubuntu
Iwe unoti zvicharega kumisikidza PowerPC asi zvakare kune chero 32-bit dhizaini?
Isa PowerShell paLinux